Mashandisiro anoita Vashandisi nePinterest | Martech Zone
Mashandisiro anoita Vashandisi nePinterest
Chishanu, February 22, 2013 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Vhiki rino ndakakokwa kuti ndive padare ndichitaura nezvakagadzirwa nematunhu (odhiyo iri pano) mune meetup ne Muenzaniso Magazini. Zvichida kupfuura chero ripi zvaro rimwe boka, vagadziri vane mukana unoshamisa wekushandisa mukana wekuona masvikiro enhau senge anouya, Instagram or Pinterest.
ichi ruzivo rwekutungamira ruzivo mashandisiro anoita vashandisi nemapini, mabhodhi, vamwe vashandisi uye zvigadzirwa paPinterest. Kubva Wishpond
Zviverengero zvekutanga zvePinterest zvakataura nezve kukurumidza kutorwa nevashambadzi, maartist uye mafashoni. Zvisinei, patakatanga yedu Kushambadzira Infographic bhodhi, isu takanga tiri uye tinoshamiswa nemugwagwa mukuru watinoramba tichiwana. Pinterest ipuratifomu ine simba yekuona nekuti iri nyore kwazvo kutarisa kuburikidza nemazana ezviratidzwa kusvikira mumwe abata ziso rako.
Tags: kusanganashandisa pinterestPinterestpinterest stats
Kukadzi 26, 2013 na2: 51 PM
Ndinoda kutanga kutaura nezvekuti ini ndiri mucheki weinfo-giraidhi saka, chokwadi ini ndaizoverenga izvi!
Ini ndinoda Pintrest uye semukadzi, koreji mudzidzi ini ndinopedza yakati yakati wandei nguva "pini". Sehukama neruzhinji uye wekushambadzira mudzidzi, ini handigone kubatsira asi kuda kuziva nezve iro basa rePintrest mukukanganisa maitiro evatengi. Ini ndinofunga kuti saiti senge Pintrest inzira yakajeka yekuwana kushambadzira kwemahara! Ini ndinofunga iro ramangwana richava dzakawanda dzimwe nzira dzekugadzira dzekuverevedza kushambadzira uye kushambadzira muhupenyu hwevanhu, kutenderera pasocial media.